လမင်းခင်: February 2010
Posted by LRDP at 10:02 PM 1 comments Links to this post
Posted by LRDP at 7:38 AM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 8:27 AM0comments Links to this post
အောင်လံလယ်သမားအမှု နှင့်ပတ်သတ်၍ နအဖ မှစီရင်ချက်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းအပေ့ါ် FTUB မှကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
Posted by LRDP at 8:09 AM0comments Links to this post
ကျမတို့ ချစ်ခင်လေးစားအားကိုးရတဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရဦးတင်ဦး
ဦးတင်ဦးက သူ အထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့ ကာလ ၆ နှစ်ကို ဘယ်လို ကျော်ဖြတ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ပထမဆုံး ပြောပြပါတယ်။ကျနော်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်တော့ဗျာ ရတနာသုံးပါးကို အထူး ကိုင်းရှိုင်းရတော့တာပေါ့။ နောက်ပြီးတော့လည်း ဗုဒ္ဓရဲ့ ပဌာန်းတို့၊ ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်တို့ ၊ ဓမ္မစကြာတို့ - - - စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ၊ အဖမ်းခံနေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွ ထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု အားလုံး အမြန်ဆုံး လွတ်ကြပါစေ၊ အမြန်ဆုံး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးနိုင်ကြပါစေ၊ ဘုရားကု ကုတယ်ပေါ့ဗျာ၊ နောက်တော့လည်းပဲ just to kill the time (အချိန်ကုန်အောင်) ပေါ့ဗျာ ကျနော်က ငယ်ငယ်တုန်းက ဘောလုံးသမား ဆိုတော့၊ ဘောဝါသနာပါတော့ ဘောလုံးပွဲတွေကို မလွတ်တမ်း ကြည့်တယ်ဗျ။ ပရီမီယာလိဂ် ကြိုက်တဲ့ပွဲတွေကို ကြည့်ပါတယ်။ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်တို့၊ ချယ်လ်ဆီးတို့၊ အာဆင်နယ် တို့၊ လီဗာပူတို့ စသဖြင့်ပေါ့။ နောက် - အများတိုက်တွန်းလို့၊ ကျနော့်မိသားစုက တိုက်တွန်းလို့ ကိုယ့်ရဲ့ အကျိုးအကြောင်းလေးကိုလည်း ရေးဖြစ်တယ်ဗျ။ စာအုပ်လည်း ကျနော်ထင်တယ် အုပ် နှစ်ဆယ်၊ အစိတ်လောက်တော့ ရေးထားတာပဲ။ စာအုပ်စာတမ်းတွေ ဖတ်ပါတယ်ဗျာ၊ အခါအားလျော်စွာ ပေါ်လာတဲ့ စာအုပ်တွေပေါ့။၂၀၀၇ ခုနှစ် သံဃာဦးဆောင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုကြီးမှာ NLD ရဲ့ ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အားမရကြတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးတင်ဦးရဲ့ အမြင်ကို သိချင်ပါတယ်သိတဲ့ အတိုင်းပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း အနှောင်အဖွဲ့ ခံနေရတဲ့အချိန်၊ ကျနော်ကလည်း အနှောင်အဖွဲ့ ခံနေရတဲ့အချိန်မှာ ကျန်နေတဲ့သူများက အဖွဲ့ချုပ်ကြီးကို မားမားမတ်မတ် ရပ်နိုင်အောင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်လာတဲ့ အချိန်မှာ ကောင်းကောင်း ရပ်တည်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ရတဲ့ ကိစ္စတွေလည်း ရှိတော့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ချိန်ချိန်ဆဆနဲ့ လုပ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ နယ်တွေ နယ်တွေမှာက အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေက ဒေသအလိုက် အထိုက်အလျောက် ဆောင်ရွက်ကြတာတွေကို အဖွဲ့ချုပ် အနေနဲ့ ဒီအတိုင်းအတာအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်တာကို ကျေနပ်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးတင်ဦး ထိန်းသိမ်းခံထားရလို့ NLD မှာ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု ပိုများလာတယ်လို့ ပြောသံ ကြားရပါတယ်။ ဒါမျိုးက အခုခေတ် အခုအခြေအနေနဲ့ရော သင့်တော်ပါရဲ့လား။ချုပ်ကိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အပြင်မှာက ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ် တခုခု လုပ်လိုက်လုပ်လိုက် အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေဟာ ပြင်းထန်တဲ့ အနှောင်အဖွဲ့ အထိန်းအသိမ်း အချုပ်အနှောင် ဒါတွေ သိပ်ခံရတဲ့အတွက် ချိန်ချိန်ဆဆ လုပ်ရတဲ့ သဘောတွေပါဗျာ။ သူတို့ဟာ အကောင်းဆုံး အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်ကိုင်ကြတယ်လို့ပဲ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်။ဦးတင်ဦး အကျယ်ချုပ်က လွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲ NLD ရွှေဂုံတိုင် ကြေညာစာတမ်းကို ကိုင်စွဲသွားမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ စစ်အစိုးရကလည်း ဒီနှစ်ထဲ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မယ်လို့ ကြေညာထားပြီးပါပြီ။ ဒီတော့ နှစ်ဘက် အဆင်ပြေဖို့ ဖြစ်လာပါ့မလား။ တခြား ရွေးချယ်စရာရော ဘာတွေများ ရှိပါသေးသလဲ။ဒါကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတဲ့ စကား ရှိပါတယ်၊ အချိန် မကျသေးဘူး၊ အချိန်မကျသေးဘူး လို့ သူ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ခု လောလောဆယ်မှာတော့ ရွှေဂုံတိုင်စာတမ်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာပဲ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ထားရတဲ့ အနေအထားလို့ ကျနော်တို့ မြင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း သက်ဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများနဲ့ တွေ့ပြီးတော့ ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်၊ ဒါတွေ ရှိတယ်၊ အဲဒါကြောင့် ကြေကြေလည်လည် ဆွေးနွေးလိုက်ရင်တော့ ဒီပြဿနာဟာ ချောချောမောမောနဲ့ ပြေပြေလည်လည် ဖြစ်သွားစရာ အကြောင်း ရှိတယ်လို့ ကျနော် မြင်ပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အဆင့် ရောက်အောင်လို့ ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ သွားရင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်မလဲ။ကျနော်တို့က အဖြေတခုကိုတော့ တိုင်းပြည်ကို ပြောရမယ် ဆိုတာကို သဘောပေါက်ပါတယ်။ ပြောရမယ့်ဟာလည်း လောလောဆယ် သူတို့ဘက်ကလည်း ဒီနေ့အထိ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတို့၊ ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စည်းမျဉ်းတို့၊ ပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း (ဥပဒေ)တို့က ဘာမှ မထွက်သေးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောနေတဲ့ အချိန် မကျသေးဘူး ဆိုတဲ့ မူဟာ လောလောဆယ်မှာတော့ လျော်ကန်သင့်မြတ်တယ်လို့ ကျနော်က ဒီလိုပဲ ပြောရတော့မှာပဲ။ဦးတင်ဦးက ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်းအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးတော့ အခု လွတ်လာတဲ့အခါမှာ စစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့ ဆက်ဆံရေး ပိုကောင်းလာမယ့် အနေအထားရော ရှိပါသလား။ဆွေးနွေးဖို့ ပြောလာတာ အခုမှ မဟုတ်ဘူး၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကတည်းက ပါပဲ။ ကျနော်တို့က ဆွေးနွေးဖို့ဟာကို တစိုက်မတ်မတ် ရပ်တည်နေပါတယ်။အနှစ် ၂၀ လုံးလုံး စေ့စပ် ဆွေးနွေးဖို့ ပြောလာတာ အခုအချိန်မှာရော အောင်မြင်မယ့် အနေအထားမျိုး တွေ့ရပါသလား။စေ့စပ် ဆွေးနွေးတဲ့လမ်း မဟုတ်ရင် ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ လုပ်မလဲလို့ ခင်ဗျားတို့ ထင်သလဲ၊ ဆူရမလား ပူရမလား ဘယ်လိုလဲ၊ အကြမ်းဖက်တာကိုတော့ အစကတည်းက အဖွဲ့ချုပ်က မူ မဟုတ်တော့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ မျှော်မှန်းတဲ့ ခေါင်းဆောင် ဆိုတော့ကာ ကျနော်တို့က ဆွေးနွေးတဲ့ နည်းလမ်းပဲ လုံးပမ်းရမှာပဲ။ဦးတင်ဦးရော၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရော ဒီပဲယင်း အရေးအခင်း အပြီးမှာ ထိန်းသိမ်းခံရတာပါ၊ ဒီပဲယင်းကိစ္စအပေါ် ဘယ်လို သုံးသပ်ပါသလဲ။ နိုင်ငံရေးအရ လုပ်ကြံမှုတခုလို့ ယူဆပါသလား။ဒီလိုပြောရင် အဖြေ ပေါ်မယ် ထင်တယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူရသတ္တိ၊ ဓမ္မသတ္တိ ပြည့်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ဗျ။ ဒီပဲယင်းမှာ သူဟာ အသက်လုပြီးတော့ ကံကောင်းထောက်မလို့ လွတ်လာတယ်ပေါ့ဗျာ၊ ကျနော်လည်း အလားတူပဲ၊ ကျနော်ကတော့ သူ့လောက် အရေးမကြီးပါဘူး။ ညောင်နှစ်ပင်ညီလာခံ တက်ဖို့ ဖြစ်လာတော့ သူနဲ့ ကျနော်တို့ CEC (အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်များ) တွေ့ခွင့်ရတယ်၊ သူပြောတဲ့ စကားက အင်မတန် ကောင်းပါတယ် ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တလုံးတပါဒမှ ကျမ မပြောတော့ပါဘူး၊ ဟိုဘက်က လူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးတယ်၊ အဲဒီတုန်းက ဗိုလ်ချုပ်သန်းထွန်းတို့၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးတင်လှိုင်တို့ ပြီးတော့ ထောက်လှမ်းရေးပိုင်းက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပါကြတယ်။ ဒီပဲယင်းကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်တာ အားလုံးကို ဘာမှ မပြောတော့ဘူး၊ ရှေ့ဆက် နိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိရာ ရှိကြောင်း၊ ကြီးပွားရာ ကြီးပွားကြောင်း လုပ်ဖို့ ဒီလိုတော့ ပြောလိုက်တယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးကို လွတ်ပေးပါ၊ နယ်မှာ ပိတ်ပင်ထားတဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အားလုံးကို ဖွင့်ခွင့် ပေးပြီးတော့ ပါတီ တခု အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စ အ၀၀ လုပ်ဖို့ရယ် နောက်ပြီး ဆက်လက်အဖြေရှာဖို့ကိစ္စ ဒါကတော့ ညောင်နှစ်ပင်မှာ ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း ညောင်နှစ်ပင်(ညီလာခံ)တက်ပြောမယ် ပေါ့ဗျာ၊ ဒီသဘောလေးတွေ ပြောလိုက်တော့ လာရောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အင်မတန် ၀မ်းသာတယ်၊ ၀မ်းသာလိုက်တာဆိုပြီးပြန်သွားတဲ့အကြောင်းကို ကျနော်တို့ကို ရှင်းပြတော့ ကျနော်တို့ သိတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေတော့ လွတ်လာတော့မှာပဲ ဆိုပြီးတော့ ဦးအောင်ရွှေက ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ ညီလာခံတက်မယ်၊ ဘယ်သူတွေတက်မယ် ဆိုပြီးတော့ စာရင်းတွေ ရေးထားလုပ်ထားတယ်။ အဲဒီလို ၀မ်းပမ်းတသာနဲ့ လုပ်ကြတာပဲဗျ။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းကျတော့ ဒါမဟုတ်ပြန်ဘူး ဆိုပြီး ပြောပြီးတော့၊ နောက်ပိုင်း တက်ချင်လဲနေ မတက်ချင်လည်း သဘောပဲ ဆိုပြီးတော့၊ တက်ရင်လည်း ကျနော်တို့ အားလုံးက အချုပ်အနှောင်နဲ့ နိုင်ငံရေးသမား ဆိုရင်လည်း အချုပ်အနှောင်နဲ့ တက် ဆိုတဲ့သဘော အဲဒီလိုဟာလေးတွေက ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျ။
Posted by LRDP at 7:07 AM0comments Links to this post
ဘလော့ကာမငယ်နိုင် က ကိုယ်အကြိုက် ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကို Tag ထားတယ် လေ မအားလပ်တဲ့အတွက်
ချက်ချင်းမရေးနိုင်ပေမဲ့ ကွန်ပျူတာကိုင်နေတိုင်း အကြွေးတင်နေသလိုစိတ်ထဲရှိတာမို့ကိုယ့်အကြိုက်ဆို
တာလေးကို ပြောပြ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကျမ ကြိုက်နှစ်သက်တာ တစ်ခုထဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ ဥပမာပြောရရင်အစားအသောက်ဟင်းလျာထဲမှာ
ဘာအကြိုက်ဆုံးလဲ ? အ၀တ်အထည်မှာဘာအကြိုက်ဆုံးလဲ? ဆိုတဲ့ အကြိုက်အသီးသီးရှိနေကြမှာအသေ
အချာပေမဲ့ ကိုယ့်အကြိုက် ဆိုတာ ကတော့ တစ်ခုတည်းမှာမှ ကြိုက်နှစ်သက်တာကို ဆိုလိုတာဆိုတော့
ကျမ စာဖတ်တာ စာအုပ်တွေကိုရွေးချယ်ဖတ်ရှုပြီး ကောင်းနိုးရာရာတွေးခေါ်တာကို သိတ်ကြိုက်ပါတယ်
စာအုပ်တွေကိုစနှစ်သက်ခဲ့တာ ဆရာကောင်းတွေ ရရှိတာနဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေ ရဲ့ ကျေးဇူးလို့ ပြော
ရင်မမှားပါဘူး ။ ပဉ္စမတန်း မှာထဲက ကျမကို ကျူရှင်သင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဟာ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ပါ။
ဆရာက ဒါဖတ် ဒါဖတ်လို့ မပြောပေမဲ့ ကျမထက်အသက်ငယ်တဲ့ဆရာ့သား ကျမငယ်သူငယ်ချင်းကတော့
ကျမကို စာဖတ်တက်အောင်ကောင်းနိုးရာရာစာအုပ်တွေညွှန်ပြခဲ့တယ် ။သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ စာရေးဆရာအချို့ 
နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ် ။ စာတွေဖတ်ပြီး စာပေတွေကိုဝေဖန်တွေးပေမဲ့ စာအုပ်ကောင်း ဖြစ်အောင် ကျမ
မရေးတက်ခဲ့ပါ ဘူး ။ ကျမငယ်စဉ်ထဲကစာပေ၀ါသနာပါတဲ့သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး စာဖတ်ထားတာတွေကို
တော်ကီပွါးလေ့ရှိကြပါတယ် ။။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို ခု စာရေးဆရာစာပေဝေဖန်နိုင်တဲ့သူတောင်
ဖြစ်လို့ ပေါ့ -ကျမစာအုပ်ဆိုင်ဖွင့်ဖြစ်ခဲ့တယ် ကျမနာမည်ရင်းနဲ့ --------စာပေ ဆိုပြီးတော့လေ -စာအုပ်
ဆိုင်ဖွင့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က မြန်မာပြည်သူအများစုက အဲဒီအချိန်မှာရုပ်ပြနဲ့ နက္ခတ္တရောင်ခြည် လောက်
ပဲအားသွန်ခွန်စိုက်ဖတ်နေချိန်မှာ သူတို့ ကို သုတစာပေတွေ ဖတ်လာအောင်စိတ်ဝင်စားလာအောင် ရုပ်ပြ
ငှါးသူဟူသမျှ ကို သုတစာပေတွေအခမဲ့ တွဲပေးပြီး ဖတ်စေ့ချင်တဲ့စေတနာပေါ့ သတိရလို့ ထဲ့ကြွားရဦးမယ်
အဲဒီ့စာအုပ်ဆိုင်လေးကို သူငယ်ချင်းရန်နောင်က စာအုပ်တွစုဆောင်းရှာပေးပြီး ဘဘဦးတင်မိုး(ကဗျာ)က
အဲဒီလိုပဲ ပါတီမှာစာဖတ်ဝိုင်း လုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ စာဖတ်ဖို့ တက်ကြွခဲ့ ကျမရယ် ဗဟိုလူငယ်အဖွဲ့ ဝင်ဖြစ်
ခဲ့တဲ့ မခင်မိမိခိုင်ရယ် တို့ က မယ်တက်ကြွတွေပေါ့ ။ တစ်မြို့ လုံးအနံ့ စာအုပ်ကောင်းတွေရှာဝယ် လေ့လာ
ကြ ငြင်းခုန်ကြနဲ့ဘဘဦးကြည်မောင်ကတော့ လူငယ်တွေ စာပေကောင်းတွေတိုးဖတ်တက်ဖို့ အချိန်ပေး
ပြီးမြေတောင်မြောက်ပေးနေတက်တာပေါ့ ။ ဒီလိုအခြေအနေတွေပြန်တွေရင် စာအုပ်လေးတွေ ရှာဖတ်
တာနဲ့ကွန်ပျူတာရှေ့က အီးဘုတ်တွေကိုကြည့်ရတာနဲ့အရသာက တူကိုမတူသလိုပါပဲ ။ဒါ့ ကြောင့်ကျမ
ကျန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲ စာအုပ်အအုပ် ၂၀လောက်ဝယ်ပစ်လိုက်တယ် ။ကွန်ပျူတာမတက်နိုင်တဲ့ မဟာချိုင်
က အလုပ်သမားလေးတွေဖတ်ဖို့ပို့ ပေးမယ်လေ ။ကျမကိုယ်တိုင် စာအုပ်ကောင်းလေးတွေ နှစ်သက်ခဲ့
တာကို ကိုယ်ချင်းစာလို့ ပေါ့ နော ။
အင်း စာဖတ်တာကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့စာယောင်ယောင်ပေယောင်ယောင်တော့ မဟုတ်ဘူးနော့
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ စာပေကို သာလေ့လာသူပါ ။ အနှစ်သာရအားဖြင့်ပြောရရင် လက်တွေ့ ကျတာ နဲ့အတုယူ
သင့်တာတွေပဲ ကျမဖတ်တယ် ။ လက်တွေ့ ကျတာဆို ဗုဒ္ဓစာပေ ပေါ့ ကျမ သဂြိုလ်ကိုးပိုင်းလုံးကိုကြေညက်
အောင်ဖတ်တဲ့အပြင် လက်တွေ့ ကျတဲ့ ဓမ္မတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်တဲ့အထိလေ့လာသင်ကြားခဲ့တယ်။။
လမ်းညွန်တဲ့စာပေတွေ သမိုင်းကြောင်းကို ၀ထ္ထုသဖွယ်ပြုစုထားတာတွေလည်းကျမနှစ်သက်သလို ဆရာမ
ဂျူးရဲ့စာအုပ်တချို့ ကိုလည်း ကျမ သဘောတွေ့ ပါတယ် ဥပမာတစ်အုပ်ပြောရရင် ပင်လယ်နဲ့ တူသောမိန်းမ
များ ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုပေါ့။။ ဒါ့ အပြင် စာဖတ်သူတိုင်းဟာ ကာရာမာဇော့ တို့ ညီအကို တွေအကြောင်းလည်း
ဖတ်သင့်သလို ဆရာပါရဂူရဲ့ မင်းနဲ့ ပြည်သူ ဆိုတာကိုလည်း ဖတ်ထားသင့်တယ် ။ ဒါတွေ ကျမကြိုက်ခဲ့တဲ့ထဲ
က စာရိုက်ရင်းခေါင်းထဲရောက်လာတာတွေပေါ့ ။ ကျမသာအလုပ်တာဝန်တွေမများရင် အဲဒီ့စာအုပ်တွေထဲ
က ထုတ်နုတ်ပြီး ဘလော့ကာ မိတ်ဆွေ တွေ ကို လက်ဆင့်ကမ်းချင်တယ် ။
ပြီးတော့ ကျမ ကအင်္ဂလိပ်စာသာမကောင်းတာ ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေဆို စွဲစွဲမြဲမြဲ ဖတ်ခဲ့ပါတယ် ။ဒီလိုဖတ်
ချင်စိတ်ဖြစ်တာလည်း သူတို့ စာပေတွေ သိတ်အဆင့်မြင့်တာရယ်ရလဒ်တခုခု့ကျန်ခဲ့တာတွေရယ်ကြောင့်ပါ ။။
စာဖတ်ရင် ဆရာဖေမြင့် တို့ဆရာအောင်သင်းတို့ ရဲ့စာပေ တွေကိုလည်း အသစ်ထွက်တိုင်းရှာဖွေဖတ်ခဲ့ပါ
တယ် ။။ခုပြောတာဟုတ်ဘူးနော့ --၁၉၉၆ နောက်ပိုင်းထဲက ကျမ စာအုပ်မဖတ်ဖြစ်ခြ့တော့ပါဘူး။ငယ်စဉ်က
နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက် လီနင် ပုံနဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်ခိုင်း လီနင်ရဲ့ ကြိုးစားခဲ့ရမှုတွေကို ကျောင်းစာမေးသ
လို ပြန်မေးလို့ပြန်ဖြေခဲ့ရတဲ့ (၁၂ နှစ် ၁၃ နှစ်) သမီး အရွယ်က စာဖတ်ခဲ့ရတဲ့ဘ၀ နဲ့ စာရင် ထောင်တွင်းက
နေခိုးဖတ်ခဲ့ရတဲ့ပိန့် ကျင်းတို့ ချူအင်လိုင်းတို့ လီရှောက်ချီတို့ ကို အားကျခဲ့တဲ့အတွေးသမားဘ၀က ပိုကောင်း
ခဲ့ပါတယ်။။ခု ခေတ်တွေမှီပြီးကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်နေရပေမဲ့ အနှစ်ရှိတာတွေ အ၀င်နည်းပြီး ပိသုဏတွေ၊သမ္ပပါ
လပ္ပ နဲ့ အချိန်ဖြုန်းနေသူတွေကြားမှာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အချိန် နဲ့ အလုပ် အဟုတ်တရားနဲ့ အလုပ်အမှား
တွေကွဲပြားအောင်အတော်ကိုသတိထားနေရပါတယ် ။။ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကိုယ်အကြိုက်ထဲမှာ ခုမလုပ်ဖြစ်
တာများတဲ့စာဖတ်ခြင်းကို တင်ပြရတာတော့ တကယ် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ပြန်ရပြီး ပြည်သူ
တွေ လူနေမှုဘ၀ သင့်တင့်လာရပြီဆိုတဲ့ အခါမှာတော့ တကယ်နေချင် တာ စာအုပ်နဲ့ ပါလို့ တင်ပြရင် မငယ်
နိုင် ရေ တက်(ခ်) တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ .ဘလော့ပို့ (စ်)တွေ ပုံမှန်မတင်ဖြစ်ပဲ တချို့ နေ့ တွေ ဆို ကိုယ့်ဘလော့
လေးတောင်ဖွင့်မကြည့်ဖြစ်တဲ့ ကျမကို သတိတရ ရှိနေကြတယ် ဆိုတာကို သိရလို့ ပို ၀မ်းသာပါတယ် ။ Tag ရဲ့
သဘောတော့ကျမသိတ်နားမလည်ဘူး ကျမ ကလည်း ပြန် ပြီး Tag ရမယ် ဆိုရင် ကျမ Tag လုပ်ချင်သူတွေက
တော့ မခင်မင်ဇော် ၊ညီမလေး ငွန်ငယ်မိုး၊ ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ)၊ညီမလေးဒရင်း(မက်မက်)၊မောင်လေးရဲဝံ့သူတို့ 
ဖြစ်ပါတယ် ။ အချိန်ပေးနိုင်ရင်ပေါ ကိုယ့်အကြိုက် ပြောပြကြရအောင်နော့
Posted by LRDP at 8:17 AM2comments Links to this post
(၉၅) နှစ်မြောက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ နဲ့အတူ ဘဘဦးတင်ဦးလွတ်ပြီ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်၏ အားအထားရဆုံးသော် ခေါင်းဆောင်များထဲမှ တစ်ဦးအပါအ၀င်
ဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦး ယနေ့ လွတ်မြောက်လာသည်ကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုပါသည် ။
ဘဘ နိုင်ငံရေးတာဝန်များအား ကျမ်းမာစွာ နှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။။
ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံကလေးများနေ့(မြန်မာကလေးငယ်များ အတုယူရမည့် လွတ်လပ်ရေးဖခင် အာရှခေါင်းဆောင် တစ်ဦး
ဖြစ်တဲ့ ) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ ကို CDC ကျောင်း ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဗကသ များအဖွဲ့ ချုပ် မှ ကိုဇော်ထွန်းရဲ့
CDC ကျောင်းသားတွေ ကို ပြုစုပျိုးထောင်နေတဲ့ အဆောင် မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။။ (၉၅)နှစ်မြောက်ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ နဲ့ အတူ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကလေးများနေ့ ဖြစ်တာကြောင့် ကလေးငယ်တွေကို ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ လမ်းစဉ် နဲ့ရိုးသားခဲ့မှု ပေးဆပ်အနစ်နာခံခဲ့မှု
တွေကိုပြည်ပရောက် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှခေါင်းဆောင်များကပြောပြ ပြီး ကလေးများက စာစီစာကုံးပြိုင်းပွဲ ၊ကဗျာပြိုင်
ပွဲ ၊ ပန်းချီပြိုင်ပွဲ ၊ကြဘန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲ တွေ နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ကျေးဇူတွေ ဆပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ မှတ်မှတ်သားသား ပြည်သူ့ 
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ကိုခွန်မြင့်ထွန်း ပြောသွားတာတော့ ၈၈ အရေးတော်ပုံဟာ ဗိုလ်ချုပ် ဓါတ်ပုံကဦးဆောင်ခဲ့တယ်
Posted by LRDP at 2:50 AM 1 comments Links to this post
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတည်ထောင်မှုပြုခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စုနေ့ 
UNA (ရန်ကုန်) နှင့် UNLD (ပြည်ပ) တို့ ၏ ပြည်ထောင်စုနေ့ ကြေညာချက်
Posted by LRDP at 10:49 PM0comments Links to this post
ဒီဖိတ်စာလေး က ကျေးဇူးသိတက်သူတွေရဲ့ ကျေးဇူးဆက်တဲ့ဂုဏ်ယူစရာဖိတ်စာလေးပါ။။
ဗိုလ်ချုပ်သမိုင်းကိုဖျောက် ဗိုလ်ချုပ်သမီးကို ပျောက် သွားစေအောင် စစ်အုပ်စု ရဲ့ မတရား
သမိုင်းမှန်တွေ ဖျောက်ဖျက်နေမှုကို အဲတုရဲတဲ့ ရဲရဲတောက် ဖိတ်စာလေးဖြစ်တာမို့ ကျမ
ဂုဏ်ပြုဖေါ်ညွှန်းရင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အမှတ်တရ ကဗျာလေးတွေ စာလေးတွေ တင်
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၃ မှာ
၁၉၁၅ ရှေ့နေ ဦးဖာသား
ငါတို့ မမေ့ အား
အဲဒီ့လိုဗိုလ်ချုပ် အမှတ်တရ ကဗျာရွတ်ဆိုပွဲ ကို ၁၉၉၆ ခုနှစ် ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ 
မြန်မာနိုင်ငံကလေးများနေ့ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့အတူတကွ ကျမတို့ 
တွေ ကျင်းပခဲ့ကြတယ် ။ဒီပုံလေးကတော့ကျမဘလော့မှာတင်ထားတဲ့ ကျမရဲ့
သမီးကြီး ထက်ရည်မွန် (ရည်မွန်ထိတ်ထား)နဲ့ ကျမတို့ ခေါင်းဆောင်တို့ အဲဒီ့
နှစ်ကကလေးများနေ့ မှာအမှတ်တရ ပုံလေးပေါ့ ။ ကျမသမီးကြီးက ဗိုလ်ချုပ်
ဗိုလ်ချုပ်ဒို့ ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတဲ့ကဗျာလေးကို တတွတ်တွတ် အော်ရွတ်တက်နေတဲ့
၁၉၉၅ ဇူလိုင် ၁၀ ၇က်နေ့ ကျမတို့ ခေါင်းဆောင် ပထမအကြိမ် (၆)နှစ်အကျယ်ချုပ်ကပြန်လွှတ်လာပြီး ကျမတို့ လူငယ်တွေအန်တီအိမ်ရဲ့
ရှေ့ခန်းလေးမှာပဲတွေ့ ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ စာပေဆွေးနွေးတာတွေစတင်ခဲ့ကြတယ် ။ အဲဒီ့မှာအန်တီနဲ့ ပတ်သတ်လို့ကလေးများအပေါ်
အမြင်သဘောထားလေးတစ်ခုနဲ့ ကျမကိုသွန်သင်ပြတာလေးပြောပြချင်လို့ ပါ။ကျမ ပါတီလူငယ်တာဝန်ယူပြီးသမီးကြီး တိုးလို့ တွဲလောင်း
နဲ့ အစည်းအဝေးပွဲတွေ စာဖတ်ဝိုင်းတွေတက်လ့ရှိပါတယ်။ တနေ့ မှာ အန်တီနဲ့အတူစာအုပ်တစ်အုပ်အကြောင်းဆွေးနွေးနေကြတုန်း
ကျမသမီးကြီးက ကျမကိုပေါင်ကနေ ကိုယ်ကိုတွယ်တက်ပြီး အန်တီ့ရဲ့မျက်လုံး ကိုကြည့်ပြီး စိတ်တ၀င်တစားနဲ့ဗိုလ်ချုပ်သမီးဆိုတာအိုက်
ဖွါးဖွါးနော်မေမေ ဆိုတာရယ် ဖွါးဖွါးက သမီးကိုမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်နေတယ်ဆိုတာရယ် ခဏ ခဏ မေးလိုက်ပြောလိုက်လုပ်နေပါတယ်။
အန်တီက စာအုပ်ထဲက ဆွေးနွေးခန်း(ကျမအသေအချမမှတ်မိပေမဲ့ ပါရဂူရဲ့စာအုပ်ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်) ကိုသူ့ အလှည့်ရောက်တော့သူ မ
အမြင်ရှင်းပြနေဆဲမှာမို့ ကျမ သမီးကြီးကို စိတ်တိုပြီး တိတ်တိတ်နေ ငြိမ်ငြိမ်နေလို့ တိုးတိုးလည်းပြော လက်ကလည်း ဗိုက်ခေါက်လိမ်ဆွဲ
မဲ့ ဟန်လုပ်လေတော့ အန်တီစု က သိတ်ပါးပါတယ် မြင်သွားပြီး ကျမ ကို ကလေးမေးချင်ရာမေးပါစေ ဖြေပါ မဆူပါမရိုက်ပါနဲ့တဲ့။
နောက်ဆက်တွဲ အန်တီဆက်ပြောတာသူငယ်ငယ်က ဘယ်လောက်အမေးအမြန်းထူလဲဆို အဖွါးကို ကုတင်ဘေးမှာပန်ုပြီးတော့ကို သိချင်
ရာအကုန်မေးတာတဲ့ --ကလေးမေးတာကို ဟန့်တားရင် အိုက်ကလေး တိုးတက်မဲ့အမြင်တွေကို ဟန့် တားတာပဲတဲ့ --အဲ ကလေးကိုဖြေ
ရင်တော့လက်လွှတ်စံပါယ် ပြီး --ပြီးရော မဖြေပါနဲ့ တဲ့ မိခင်က အဖြစ်မှန် အခြေအနေမှန်ကို မလိမ် မကွယ်မညာပဲ ဖြေရမယ် တဲ့ ။ဒီလို
အမေးအမြန်းထူတဲ့ကလေး နဲ့ ကလေးကိုဖြေကြားမဲ့လူကြီးမိဘကလည်း စိတ်ရှည်ရှည် နဲ့ ဖြေပြမယ်ဆိုရင် အိုက်ကလေးသိတ်တော်တဲ့ 
ကလေးဖြစ်မယ်တဲ့ လေ ။ ပြီးတော့ ကျမသမီးကြီးကို သူ့ ပေါင်ပေါ်တင်ချော့မော့ပြီးစိတ်မရှည်တဲ့ ကျမ ဆုံးမခဲ့ဖူးပါတယ် ။ အန်တီ့ရဲ့
ကလေးငယ်တွေအပေါ် တိုးတက်အောင်မြင်အောင် သူတို့ မေးခွန်းတွေ ကို မလိမ်မညာ ပြီးပြီးရောအလွယ်သဘောနဲ့ မပြောရဘူးဆိုတဲ့
ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့မှု ဟာ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ် ကလေးငယ်တွေ အပေါ်သိတ်ကို အကျိုးဖြစ်စေတာမို့မြန်မာနိုင်ငံကလေးများနေ့ အတွက်
အကျိုးဖြစ်စေမဲ့ ဖခင်ကောင်းခေါင်းဆောင်ကောင်းရဲ့သမီးမြတ် ရဲ့ စေတနာကိုလက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပါတယ် ။။
မိခင်တိုင်း သားသမီးတွေအပေါ်စိတ်ရှည်စွာမေးသမျှဖြေတက်ပါတက်ပါစေ ။။
ကလေးတို့ ရေ လာလာ လာ ****
တလင်းပြင်မှာဆုံ စို့ ကွာ
ဒီနေ့ ဟာဘာနေ့ လဲ*********
တီတီ့တီ--တီ့ တီ တီ တီ
မွေးနေ့ မှာဒို့ ဆင်နွဲ
ကျေးဇူးကြီးတဲ့ ဒို့ ခေါင်းဆောင်
တီ တီ့ တီ တီ့ တီ တီ တီ ******
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏နေအိမ်ခြံဝန်းတွင်ကျင်းပသော၁၉၉၆ မြန်မာနိုင်ငံကလေးများနေ့ တွင် ဗိုလ်မှုးကြီးဝင်းထိန် ( မြစ်ကြီးနားထောင်) ၏ သမီးအငယ်ဆုံးလေးချစ်စုဝင်းထိန် (ခ) ချစ်ချစ် မှ သီဆိုခဲ့သည်။။
ဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ် တို့ ဗိုလ်ချုပ်
မဟုတ်လျှင်မခံတက် ရဲရင့်သူ့ စိတ်ဓါတ်
Posted by LRDP at 8:20 PM 1 comments Links to this post
မနေ့ ကနေ့ ခင်းထမင်းစားချိန်ကစပြီး မိမိရပိုင်ခွင့်ကိုမိမိတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အလုပ်သမားတွေ ကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းဖို့ စစ်အုပ်စု
နဲ့ ရဲအုပ်စု တို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ် ။ မနေ့ က ကျမကိုယ်တိုင် အလုပ်ရှင် ကိုဖုန်းဆက်မေးကြည့်ပါတယ်ပြေပြေပြစ်ပြစ်လေး
အခြေအနေကိုပြောပြပြီး သူတို့ ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ် ။ အလုပ်သမားတွေကိုကျမမေးကြည့်တော့ကျမ
တို့ဆက်တောင်းဆိုဦးမယ် မရမချင်းတဲ့အဲဒီ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြားမှာပြေလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ ကျမမျော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ မထင်
မှတ်ပဲ အာဏာပိုင်က ပြင်းထန်တဲ့ ပါဝါသုံးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ။အာဏာပိုင်ရက်စက်မှာ မိုက်ရိုင်းမှာကိုမထင်မှတ်တာမဟုတ်
ပါဘူး။အလုပ်ရှင်(မန်နေဂျာ) အမျိုးသမီးက ညှင်ညှင်သာသာနဲ့ ကျမ မေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေခဲ့လို့ ပါ ။
ထင်ထားတဲ့ကိစ္စကတော့လစာတိုးပြီးချိန်ကစပြီး ပုဂလိကတွေ ဒီလို တောင်းဆိုမှုတွေဖြစ်တော့မယ်စက်မှုဇုံတွင်းမှာလည်းမိန်း
ကလေးအတော်များများက စုပေါင်းတောင်းဆိုရင် အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ အမြင်ကို သိတ်နားလည်နေကြပြီ မို့ ပေါ့။။
အလုပ်သမားတွေဘာတောင်းဆိုလဲ ဆိုတာ ဗေဒင်မေးစရာသတင်းသမားဌါးစရာ လို ကို မလိုတာအသေအချာပါပဲ ။အလုပ်
သမားတွေ ထမင်းငတ်နေတာကိုး လစာတိုးတာမှာက အဓိကပဲပေါ့ ။။ ကျမထင်တယ် အလုပ်ရှင်တိုးပေးချင်ရင်တောင် စစ်
အုပ်စုက ကန့် သတ်ဟန့် တားထားလို့ ဒီလောက်ပြဿနာကြီးမားသွားတာလေ ခုတော့ ရဲချုပ် ခင်ရီ (ဗိုလ်ကောက်ကျစ်)
ရောက်လာပြီး ဟောက်လိုက်လေတော့ ရပ်ဆဲသွားမယ်မထင်နဲ့နော့ နောက်--ဒီထက်အင်အားကြီးတဲ့ အလုပ်သမားအရေး
တော်ပုံကြီးအတွက် --အလုပ်သမားထုကပြင်ဆင်နေလေရဲ့တဲ့ -
Posted by LRDP at 8:13 AM 1 comments Links to this post
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ စကားများ .
ကိုယ်ကျိုးငဲ့ပြီး လူမျိုးရဲ့အကျိုးနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံ ဆန့်ကျင်တဲ့
အကြီးအမှူးတွေဟာ ကြာကြာမနေနိုင်ပါဘူး။ အချိန်တန်တဲ့အခါ ပြုတ်ကျမှာပဲ။ ရာဇ၀င်မှာ
ကြည့်လိုရှိယင် ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့လူဖြစ်ဖြစ် မတရားလုပ်တဲ့အခါ ပြုတ်ကျတာ ချည်းပဲ။
ဒီလို မတရားတဲ့ အကြီးအမှူးတွေရှိယင် ရဲဘော်တို့ အပေါ်မှာလဲ တည်တယ်။ ဥပမာ
မတရားတဲ့ အကြီးအမှူးတစ်ယောက်က ၀တ္တရားနှင့်မဆိုင်တဲ့
နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးအကျိုးနဲ့ မပတ်သတ်တဲ့ အမိန့်မျိုးပေးတဲ့အခါ အမိန့်ဟာ
နည်းကျ၊ မကျ၊ တရား၊ မတရား နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးမှာ အကျိုးရှိမရှိ ကြည့်ရမယ်။
အဲသလို ကြည့်တဲ့အခါ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ မရှင်းယင် သူ့ထက်ကြီးတဲ့ အကြီးအမှူးကို
ဖြစ်စေ၊ တစ်ခြား အကြီးအမှူးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ် သွားမေးရမယ်။ ဒီအခါမှာ
ရဲဘော်တို့ဟာ ဘယ်ဒင်း မှန်တယ်၊ မှားတယ် သိနိုင်မယ်။”
“လက်ဖွဲ့အနေနဲ့ဆောင်ပြီး သတ္တိနှင့် သစ္စာရှိလျှင် မောင်တို့ ခြေချရာအရပ်များသည်
အကျင့်စာရိတ္တ၊ အလုပ်အကိုင်၊ နိုင်ငံချစ်စိတ်၊ အမျှော် အမြင်ရှိတယ်လို့
နောက်လိုက်လုပ်ဖို့ အသင့်ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ရဲဘော်တို့အားလုံး ကြိုးစားကြပါ၊
“တစ်ခြား မှာကြားလိုတဲ့အချက်ကတော့ ပြောနေကျ စကားပဲ။ ဒါပေမယ့် ထပ်ပြီး
နိုင်ငံသားတွေကို ညှဉ်းဖို့ မဟုတ်။ လက်နက်အားကို တန်ခိုးပြဖို့ မဟုတ်။ စစ်တပ်ဟာ
နိုင်ငံရဲ့ အစေခံဖြစ်ရမယ်။ နိုင်ငံဟာ စစ်တပ်ရဲ့ အစေခံ မဖြစ်ရဘူး။ ဒါက
စကားရိုင်းရိုင်းနှင့် နားလည်အောင် ပြောပြတာပဲ။ ဒီစကားကို ကျုပ်ပြောတာဟာ
စစ်တပ်ကို ကျုပ် ပြန်နှိပ်ချင်တဲ့ သဘောနဲ့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ ငါတို့ဟာ
လက်နက်ကိုင် လူတွေဖြစ်ကြသော်လဲ မတရားမလုပ်။ နိုင်ငံရဲ့ ရန်သူ တွေ မဟုတ်။
နိုင်ငံရဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးသဘောပေါက်အောင် ပြောပြခြင်းပဲ။”
အရင်တုန်းက ပြောတာတွေ မေ့ပြီး တစ်မျိုးလုပ်ကြတာပဲ။ ဒါ ထုံးစံအတိုင်းပဲ။ ငါတို့က
ဒီလို မဟုတ်။ အားနည်းတဲ့အခါလဲ အားကြီးတဲ့လူကို မတရားယင် မကြောက်၊
ပြချင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် စစ်တပ်ဟာ နိုင်ငံရဲ့ အခြေခံဖြစ် တယ်လို့ ပြောတာပဲ။”
ဟုတ်တာနှင့် မဟုတ် တာ ခွဲခြားသိရမယ်။”
“ဇာတိမာန် ကောင်းကောင်း ထားတတ်ကြရအောင် လုပ်ကြပါ။ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ချစ်ပါ။
ဗမာတွေဟာ လူဖျင်းတွေ၊ လူကြောက်တွေ၊ လူပိုတွေ၊ လူရိုင်းတွေ၊ လူ့ဂွစာတွေ၊
လူ့မတရားတွေလို့ ဒီကမ္ဘာက အထင်ခံရ အောင် မလုပ်ကြပါနှင့်။ ဗမာတွေဟာ ဒီလို
မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အလုပ်လုပ်ပြီး ဂုဏ်ယူကြပါ။ အဲဒါ ကျုပ် လူမျိုး
စိတ်ဓာတ်မထားကြဖို့ပဲ။ ဒီနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီပြင်နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ဖြစ်
စစ်သားတွေချည်း နိုင်ငံချစ်ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ခြား စစ်သားမဟုတ်ပေ မယ့်
နိုင်ငံအတွက် အမျိုးမျိုး အနစ်နာခံ၊ အမျိုးမျိုး စွန့်စားလုပ်ကြတဲ့လူတွေလည်း
ရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် စစ်သားမှစစ်သားဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်သဘောထားကို ပြောင်းကြရမယ်။
သို့ပေမယ့် တစ်ခု နားလည်စေချင်တယ်။ ကျုပ်ဟာ စစ်တပ်ကို မတရားနှိမ်မယ်။
လူလည်လုပ်မယ်။ စစ်တပ်ရဲ့အခွင့်အရေးကို မတရားချိုးဖျက်မယ်ဆိုယင် ကျုပ်
အစွမ်းကုန် ကြိုးစားတိုက်ဖျက်မယ်ဆိုတာ ရဲဘော်တို့ သိစေချင်တယ်။ ယနေ့ ဒီမှာ
အများကြီးရှိတယ်ဆိုပေမယ့် နောက်ဆုံးကျတော့ အောင်ဖို့ပါပဲ။”
“ကျွန်တော် သိပ်သဘောကျတာပဲ။ ဘုန်းကြီးတွေတောင် ခေတ်ပညာအတတ်တွေ တစ်ချို့သင်ကြား
နေတယ်လို့ ကြားရတယ်။ ဘယ်ထိအောင် တော်တယ်၊ မတော်တယ်လို့တော့ မသိဘူး။ ဒီအတိုင်းသာ
မှန်လို့ရှိ ယင် ဘုန်းကြီးများဟာ မိမိဘာသာရေးနဲ့လဲ မဆန့်ကျင်၊
တိုင်းပြည်အကျိုးရှိရာ ရှိကြောင်းအလုပ်တွေကို လုပ်ပေး ကြမယ်ဆိုယင် ဗမာပြည်ဟာ
“နောက်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကို တကယ်ကာကွယ်မယ့်သူတွေဟာ ပြည်သူတွေပဲ။
သည့်ပြင် လူတွေဆိုတာ ဒီလောက် မဖြစ်နိုင်ဘူး။”
“အဲဒါကြောင့် တိုင်းသူပြည်သားလူအများ၊ ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့လူတွေကို
ပြောလိုတာကတော့ တကယ် ကျွန် မဖြစ်ချင်ယင် ကျွန်မဖြစ်တဲ့နည်းလမ်းတွေ ရှာပြီးတော့
တကယ့်စွန့်စားမှုနှင့် တကယ့်အလုပ်တွေကို လုပ်ပြ ကြပါ။ အချောင်သမားအလုပ်တွေ၊
တပွဲထိုးဝါဒတွေ၊ ဒါမျိုးတွေနှင့် လုပ်မယ်ဆိုယင်တော့ ဗမာပြည် မစွန်နိုင်ဘူး
မုန်းရုံနဲ့ ကိုယ်ထင် တာကို လုပ်လို့ မဖြစ်ဘူး။ တိုင်းပြည်နာမှာကို ကြည့်ရမယ်။
ရာထူးတွေ သိပ်မလိုချင်နဲ့အုံး။ ဆာနေတဲ့လူတွေကို သိပ်မငြူစူကြပါနဲ့။ စားကြပါစေ။
သို့သော် သူတို့စားသလို ကိုယ်လိုက်စားချင်တာလဲ ခေါင်းဆောင်အစစ် မဟုတ် ဘူး။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးမထားတဲ့ လူညာခေါင်းဆောင်တွေပဲ။ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်
ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်ယင် ခေါင်းဆောင်လုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ ပြည့်စုံပြီး
လက်ရှိခေါင်းဆောင်တွေထက် တိုင်းပြည်ကောင်းအောင် ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ လုပ်ကြပါ။”
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထား ကြပါ။ တိုင်းပြည်က အသိအမှတ်ပြုပြီး လိုက်လာတဲ့
အသိအမှတ်ပြုလောက်အောင် စွန့်စားချက်လဲ မရှိ။ ကြီးကျယ်ချင်တဲ့လူတွေဟာ ဘယ်တော့ မှ
ခေါင်းဆောင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီလူမျိုးတွေကိုတော့ ကျုပ်သဘောပြောမယ်ဆိုယင်
ဘယ်တော့မှ လျှော့ဖယ် မပေးဘူး။ မညှာတန်း ကျုပ်တိုက်ဖျက်ပစ်မှာပဲ။ သို့သော်လဲ
ကျုပ်ထက်သာတယ်လို့ ပြနိုင်တဲ့လူပေါ်ယင် ကျုပ်တို့တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို
တသက်လုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင် ဘုရားသခင် ဖန်းဆင်းထားတယ်လို့ ယုံတဲ့လူ မဟုတ်ဘူး။
အဲဒီလို သာတဲ့လူကို ဖယ်ပေးဖို့ အသင့်ပဲ။ အဲဒါ နောက်ဆုံးစကားပဲ။”
Posted by LRDP at 2:31 PM 1 comments Links to this post
အချင်းချင်းတွေ့ ဆုံစကားပြောမှု ဟာ အဖြေတစ်ခု အလုပ်တစ်ခုမဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် တို့ 
တလောက ကျနော်တို့ ၈၈မျိုးဆက်တွေ ဆုံဖြစ်ကြ တယ်။ မကောင်းဘူးလား။ဒီအချိန်မှာ ငါဒို့ မညီသင့်ဘူးလား။ တချိ့ လူတွေဆိုရင် ၂၁ နှစ်ကြာမှပြန်တွေ့ရတာ။ ဒီထဲမှာ တချို့လည်းနိင်ငံရေးဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ ကိုယ်စီရှိနေကြတယ်။ ကျနော်တို့ထဲမှာ အယူဆတွေ အမျိုးမျိုး၊ အမြင်အမျိုးမျိုး ၊ အုပ်စုအမျိုးမျိုးတွေက ရှိနေတုန်းပါ။ ကွဲပြားမှုတွေဘ ယ်လောက်ပဲရှိရှိ အခြေခံအကျဆုံး ( bottom line ) ကတော့ ၈၈ စိတ်ဓါတ် နဲ့ သွေးစည်းမှုကိုတော့ ထိမ်းသိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၈၈တွေဟာ အချင်းအချင်း တွေ့ရမယ်။ စားရမယ်။ ပြောရမယ်။ ဝေဖန်မှုတွေ၊ အကြံပေးမှုတွေရှိရမှာပါ။ ၈၈ တွေဆုံတိုင်း ရန်သူတုန်လှုပ်ရစမြဲပါ။ ဒါကိုသတိမမေ့ဖို့ လိုတယ်။ မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ကျနော်တို့ ကိုဆုံးမသွားတဲ့ စကားလေးက အလွန်အဖိုးတန်လှပါတယ်။ '' ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ ညီညွတ်ပေးကြပါကွာတဲ့။ '' ၂၀၁၀ အတွက် ကျနော်တို့ကွဲလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ အလုပ်အရ ညီညွတ်ရမှာပါ။
၂၀၁၀ ကို လက်မခံနိင်ပါဘူး။ အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ညီညွတ်တဲ့အသံကို ပြသဖို့ အဆင့်တိုင်းမှာကြိုးပမ်းရမှာပါ။
တချို့ သောသူတွေက ဘာနဲ့ ညာနဲ့ ပြောလာတာတွေ၊ ရေးလာတာတွေ၊မြှောက်ထိုးပင့်ကော်တွေ လုပ်ပြီး တောခြောက်လာတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ မကြောက်ကြနဲ့ ။ မရွံ့ ကြနဲ့ လို့ သတိပေးချင်ပါတယ်။ ကိုယ်တရားက ကိုယ့်ကိုပြဌာန်းနေပါတယ်။ စကပ်ကိုစိတ် စွဲနေသူက စကပ်ကိုပဲ မြင်တယ်။ အရက်ကို စိတ်စွဲနေသူ အရက်ကိုမြင်တယ်။ ၈၈ ကို စိတ်စွဲ သူကတော့ ၈၈ ရဲ့ စိတ် မာန်စိတ်ကို တွေ့ ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့က သူတို့မြင်နေကြ နအဖတွေလို ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ ရိုကျိုးမှု၊ လူမြင်သူမြင်ကောင်းအောင် ဟန်ဆောင်ဖေါ်ပြချက်တွေ မရှိကြပါဘူး။ ရေခဲရေလောင်းထားတဲ့ လူသေမျက်နာမျိုးမရှိဘူး။ ကျနော့် တို့ ဖေါ်ပြချက်တွေက နှလုံးရဲ့ အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာက လာပါတယ်။ ရယ်တယ်။ ပျော်စရာရှိပျော်တယ်။ ရှိတာကိုဝတ်တယ်။ ကြောင်သူတော်လို မ၀တ်ထားဘူး။ ပုတီးကိုင်ပြီးလူရှေ့ မထွက်ဘူး။
ကြေးစည်သံကြားရင် ခွေး တွေ အူမှာပဲ။ ခွေအူသံတွေကြားတိုင်း ဘာဖြစ်တာလဲ ..ဘာဖြစ်တာလဲဆို ပြီး သွေးမပျက်ကြနဲ့ ၊ ရှေ့ ကိုရဲ ရဲ သာချီတက်ပါ။
ကေသရာဇာခြသေ့င်္မင်းတို့မည်သည် ခွေအူသံကြားလို့  မပြောရဲ၊ မဆိုရဲ၊ မလှုပ်ရဲဆိုတာမရှိဘူး။ အေး- ချေငယ်စိုင်ဆတ် တွေကတော့ ဘာလုပ်လုပ် ခွေးအူသံ၊ တောခြောက်သံတွေကို နားစွင့်ရတာ ၊ ကျီးလန့်စာစား ဖြစ်ရတာပါ။ ခြေင်္သေ့မင်း ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဇယားအတိုင်း အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။
ရန်သူကို ဦးတည် တိုက်ပါ။ အချင်းအချင်း သွေးကွဲတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို သတိထားကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
( မိုးသီးဇွန် )
Posted by LRDP at 5:28 PM2comments Links to this post
“စစ်အာဏာရှင်တွေဆိုတာ သူတို့ကို ဘယ်လိုပဲ အလုပ်အကျွေးပြုပြု၊ ပြည်သူတွေကို ဘယ်လောက်ပဲ သစ္စာမဲ့ပြပြ သူတို့ အသုံးမလိုတော့ဘူး ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မျက်နှာထောက်ထားတာမျိုး မရှိခဲ့ဘူး။ အဲဒီအချိန် ဒီအနုပညာရှင်ကို ပြည်သူတွေကလည်း မုန်းတီးနေပြီဖြစ်လို့ ဘဝသေသွားပြီဖြစ်တယ်” ဟု တေးရေးဆရာတစ်ဦးမှပြောသည်။
ခေတ်ပြိုင်ရဲ့စာမျက်နှာကို ဒီကနေ့ ဝင်ဖတ်ဖြစ်တယ် အကော်ဒီယံအုန်းကျော် ကို ဂီတအစည်းအရုံးကတရားစွဲ
လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းအပေါ်မှာအခြေခံပြီး ကျမပြုံးမိတယ်စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ ပုံစံတူအလားသဏ္ဍန်တူတဲ့
အကြီးအကဲတချို့ ရဲ့မျက်နှာမျက်စိထဲမြင်မိသလို အားကောင်းတော့မယ်အားကြီးတော့မယ် အသားစီးကရှိနေ
ပြီဆိုပြီး ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာ အကော်ဒီယံကြီးကိုင်ပြီး***တိုင်းပြည်ကိုရှေ့ဆောင်ကာဒို့ ကျောင်းသားတွေသည်
စံနမူနာတင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂတို့ ဖြစ်သည် **** ဆိုတဲ့သီချင်းကိုတက်ကြွစွာဆိုခဲ့တဲ့အကော်ဒီယံအုန်းကျော်
ကိုလည်း မျက်စိထဲပြန်မြင်ပြီးထပ်ပြုံးမိပြန်တယ် ။
စစ်အုပ်စုအာဏာသိမ်းလိုက်ချိန်မှာ အခြေအနေမကောင်းဘူး ဟိုဖက်ပြေးကပ်မှဆိုပြီး စစ်အုပ်စုအကြိုက် ဖားဖားယားယား ကပ်လိုက်ခဲ့တဲ့နည်းလမ်းမမှန်တဲ့ချည်းကပ်မှုတွေကြောင့် ခုတော့ လှလှကြီးတရားစွဲခံရ
ပါပြီ ။နောက်လူတွေလည်းသင်္ခန်းစာယူပေါ့ ။
စစ်တပ်ထဲကအကြီးအကဲတွေ ကို ဖားယားပြီး ကိုယ်ဖက်ကအပြတ်ရပ်မယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ဗိုလ်မှုး
ချုပ်ကျော်ဆန်းကိုယ်တိုင်က အကော်ဒီယံအုန်းကျော် ကို တရားစွဲပါတဲ့ရီစရာလည်းကောင်းပါတယ် ။
်အုန်းကျော်ကြီးကလည်း အတွင်းရေးမှုး(၁) ကိုဖားပြီးစာတင်မိလို့ တဲ့ ကျမက မှတ်ပီလား မှတ်ပီလား လို့ပြောချင်ပါတယ် ။
ဒီလိုပဲ ခေါင်းဆောင်ကောင်းမဟုတ်တဲ့အကြီးအကဲတွေ မှာအမှန်တရားဆိုတာမရှိပါဘူး လိုရင်သုံးမယ်
မလိုရင် ဗြုန်းမယ် ပဲပေါ့ ခုအကော်ဒီယမ်အုန်းကျော် ကိုပဲကြည့်ပါ ၈၈ မှာအနုပညာသမားတစ်ယောက်
အနေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့တယ် (သူ့ ပါဝင်မှုဟာစေတနာ နဲ့ တော့မဟုတ်ခဲ့လောက်ဘူး) စစ်အာဏာလည်းသိမ်းပြီး
ရော အနုပညာ လက်နက်ကိုကြောက်တဲ့ စစ်အုပ်စုက မက်လုံးပေးပြီး ဆွယ်နိုင်သမျှလူကိုဆွယ်သွား တဲ့
အခါ အကော်ဒီယမ်အုန်းကျော်တို့ က ရန်သူဖက်ကတက်တက်ကြွကြွပေါ့ --ခုတော့ကြားတော်မူကြတဲ့
အတိုင်း သာကူး တစ်ဖန် ဘသားယိမ်းလိုက်ရောယိမ်းလိုက် နဲ့ ရပ်တည်ချက်မခိုင်မာသူရဲ့ နိဂုံးအဆုံးသတ်
ကတော့ ကျော်ဆန်းရဲ့အမိန့် ညွှန်ကြားချက် နဲ့ တရားစွဲခံထားရမှုကို မသက်တောင့်မသက်သာ ရင်ဆိုင်
လိုက်ပါဦးပေါ့ --၂၀၁၀ ကိုယိမ်းချင်နေတဲ့ဒီမိုပျက်များလည်း ကြပ်ကြပ်သတိထား နိုင်ကြဖို့ တင်ပြလိုက်
Posted by LRDP at 7:16 PM3comments Links to this post